August 7, 2019 - Pissaya News
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် ကျန်းမာရေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။အ ရက်သောက်ခြင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ လည်းထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်အရက်ကသင်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်တတ်စေလဲဆိုတာ Pissaya News ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေးလက္ခဏာရပ်များ အရက်ကိုတာရှည်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာ အသည်းကိုထိခိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပန်ကရိယကိုထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကိုထိခိုက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးပွားစနစ်ကိုထိခိုက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါအချက်တွေကတော့ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေး ဇူးတွေဖြစ်တာကြောင့် Pissaya News ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ============== အရကျသောကျခွငျးနဲ့ကနျြးမာရေး ဒီတဈခါမှာတော့ အရကျသောကျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာမယျ့ ကနျြးမာရေးကိုပွောပွပေးသှားပါမယျ။အ ရကျသောကျခွငျးဟာ မိမိတို့ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုထိခိုကျတယျဆိုတာ သိပွီးသားဖွဈကွလိမျ့မယျလို့ လညျးထငျမိပါတယျ။ဒါကွောငျ့အရကျကသငျတို့ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုဘယျလိုထိခိုကျတတျစလေဲဆိုတာ Pissaya News ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ဗဟုသုတအဖွဈပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။ အရကျသောကျခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာမယျ့ ကနျြးမာရေးလက်ခဏာရပျမြား – အရကျကိုတာရှညျသုံးစှဲတဲ့အခါမှာ အသညျးကိုထိခိုကျလာမှာဖွဈပါတယျ။ – အစာခွစေနဈကိုလညျး ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ – ပနျကရိယကိုထိခိုကျလာနိုငျပါတယျ။ – အာရုံကွောစနဈကိုထိခိုကျလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ – နှလုံးကိုထိခိုကျလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ – မြိုးပှားစနဈကိုထိခိုကျလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ – အရိုးကနျြးမာရေးကိုလညျးထိခိုကျလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အထကျပါအခကျြတှကေတော့ အရကျသောကျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာမယျ့ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေး ဇူးတှဖွေဈတာကွောငျ့ Pissaya News ပရိတျသတျကွီးကို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ #Pissaya_health
ဆံပင်ကိုအာဟာရ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေစားသုံးမှုမရှိခြင်းနဲ့ ဆံပင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်းတွေ မှားယွင်းနေခြင်းတို့ကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ပါးခြင်းတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက် ဆံသားပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေနဲ့အတူ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရမယ့် နည်းလမ်းတွေပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သီးနွေးထက်ပိုသော ရေပူပူနဲ့ ခေါင်းလျှော်ခြင်း အရေပြားလိုပဲဆံသားတွေမှာလည်း ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အပူလွန်ကဲတဲ့ ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်မိပါက ဆံပင်ရှိသဘာဝအဆီတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ဆံသားကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်တဲ့အပြင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ပြတ်ခြင်းတို့နဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေနွေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံး နွေးသထက်နွေးအောင် အအေးခံပြီးမှ ခေါင်းလျှော်သင့်ပါတယ်။ ဆံပင်ပုံသွင်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း ဆံပင်ဖြောင့်စက်၊ ကောက်စက်နဲ့ လေမှုတ်စက် (Hair dryer) အစရှိတဲ့ ဆံကေသာအလှကို ဖန်တီးပေးတဲ့ကိရိယာတွေဟာ ဆံသားပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ပရိုတင်းဓာတ်ကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံကေသာကို အပူဒဏ်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ spray ကို ဆံသားအနံှ့ လိမ်းပေးပြီးမှ ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း ဆံကေသာမှာမူလပရိုတင်းဓာတ်ဆိုတာ ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကပရိုတင်းဓာတ်ကို ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ အစာအစာတွေကို အစားနည်းတာပဲဖြစ်စေ၊ လုံးဝမစားသုံးတာပဲ ဖြစ်စေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဆံသားတွေခြောက်သွေ့ပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါး၊ ကြက်သား၊ ပဲနီကလေးနဲ့ ပဲသီးတောင့် စတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နူးညံ့မှုမရှိတဲ့ တဘက်ကိုအသုံးပြုခြင်း ခေါင်းလျှော်နေချိန်မှာဆံပင်ဖြီးခြင်း၊ ဆံပင်ခြောက်အောင် တဘက်နဲ့ အားပြင်းပြင်း သုတ်ခြင်းတို့ဟာ ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်…
လာမယ့်ရာသီမှာ ချန်ပီယံဆုအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်း မန်စီတီးနည်းပြ ဂွာဒီယိုလာက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်၊ မန်ယူ၊ စပါးနဲ့ ချဲလ်စီးအသင်းတို့ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်း နည်းပြဂွာဒီယိုလာက ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို စိုးရိမ်နေမှာမဟုတ်ကြောင်းလည်း မန်စီတီးနည်းပြ ကပြောကြားထားပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ==================== စိနျချေါမှုတှေ ပိုမိုပွငျးထနျလာနိုငျကွောငျး မနျစီတီးနညျးပွပွော =================== လာမယျ့ရာသီမှာ ခနျြပီယံဆုအတှကျ စိနျချေါမှုတှဟော ပိုမိုပွငျးထနျလာနိုငျကွောငျး မနျစီတီးနညျးပွ ဂှာဒီယိုလာက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ အသငျးကွီးတှဖွေဈတဲ့ အာဆငျနယျ၊ မနျယူ၊ စပါးနဲ့ ခြဲလျစီးအသငျးတို့ရဲ့ စိနျချေါမှုတှဟော ပိုမိုပွငျးထနျလာနိုငျကွောငျး နညျးပွဂှာဒီယိုလာက ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီစိနျချေါမှုတှကေို စိုးရိမျနမှောမဟုတျကွောငျးလညျး မနျစီတီးနညျးပွ ကပွောကွားထားပါတယျ။ #Pissaya_Sport
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၂ ဦးသေဆုံးကာ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဟာ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကို လူအများဈေးဝယ်နေချိန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ================== ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၂ ဦးသေဆုံးကာ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဟာ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကို လူအများဈေးဝယ်နေချိန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ #Pissaya_International News
ဒီနေ့ဟာ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ရဲ့  ၃၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့  သူငယ်ချင်း ယုန်လေး နဲ့ Kညီ ကတော့ မြင့်မြတ်အတွက် အောင်ပန်း ထိသွားပြီး Birthday Surprise လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “Happy Birthday Par . Myint Myat & သားသားလေး ဂျူနီယာမြင့်မြတ် အစစရာရာအဆင်ပြေပါစေ . အောင်ပန်းထိ Surprise တက်လုပ်” လို့ ယုန်လေးရဲ့  ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့  သားလေးနဲ့ မြင့်မြတ်က မွေးနေ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပြီး မြင့်မြတ် သားလေးက အခုဆိုရင် အသက် ၁ နှစ်ပြည့် ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ဟာ ယခုဆိုရင် ထိုင်းအလှမယ်ဆွန်ဆွန်နဲ့ အောင်ပန်းမှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ရိုက်ကူးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Photo Credit
ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ ဒီလမှာကျရောက်တော့မယ့် မွေးနေ့အတွက် တရားစခန်းဝင်နေကြောင်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြထားကြောင်းသိရ ပါတယ်။ မွေးနေ့လဖြစ်တဲ့အတွက်တရားစခန်းဝင်ကုသိုလ်ယူဖြစ်ပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း ဗုဒ္ဓဂုဏ် တန်ခိုးဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေ ဆိုပြီး သူမကရေးသားထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ရုပ်ရုပ်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့မွေးနေ့ကတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ(၁၀)ရက်နေ့ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ================ မှေးနလေ့မှာတရားစခနျးဝငျနတေဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျ ရုပျရှငျဗှီဒီယိုသရုပျဆောငျ ဝတျမှုနျရှရေညျကတော့ ဒီလမှာကရြောကျတော့မယျ့ မှေးနအေ့တှကျ တရားစခနျးဝငျနကွေောငျးသူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားဖျောပွထားကွောငျးသိရ ပါတယျ။ မှေးနလေ့ဖွဈတဲ့အတှကျတရားစခနျးဝငျကုသိုလျယူဖွဈပွီးခုနှဈရကျသားသမီးအပေါငျး ဗုဒ်ဓဂုဏျ တနျခိုးဖွငျ့အေးခမျြးကွပါစေ ဆိုပွီး သူမကရေးသားထားကွောငျးသိရပါတယျ။ ရုပျရုပျဗှီဒီယိုသရုပျဆောငျဝတျမှုနျရှရေညျရဲ့မှေးနကေ့တော့ လာမယျ့ သွဂုတျလ(၁၀)ရကျနေ့ ဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။ #Pissaya_Entertainment